वुहानबाट फर्किएकाहरु भन्छन्- 'क्‍वारेन्टाइनमा खानेबस्‍ने व्यवस्था सोचेभन्दा राम्रो'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वुहानबाट फर्किएकाहरु भन्छन्- 'क्‍वारेन्टाइनमा खानेबस्‍ने व्यवस्था सोचेभन्दा राम्रो'
काठमाडौँ — चीनको हुबेइ प्रान्तका विभिन्न ६ सहरबाट उद्धार भएर नेपाल आइपुगेका १७५ नेपालीले सरकारी व्यवस्थापन देखेर आफूहरु छक्कै परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार बिहानपख काठमाडौंमा उत्रिएका उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रहरीको स्कर्टिङमा भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा व्यवस्था गरिएको क्‍वारेन्टाइन क्षेत्रमा लगिएको थियो ।
अबेर राति वुहानबाट उडेका उनीहरु लगभग जाग्रामकै अवस्थामा काठमाडौं उत्रिएका थिए । 'खरिपाटी आएपछि प्राय: हामी सबै सुत्यौं । हामीलाई यहाँ बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र खानेपिउने समय तालिका दिइएको छ,' डा. जीतसिंह भण्डारीले भने, 'खानेकुराहरु बाहिर चउरमा बनाएको टेन्टमा लन्‍चबक्स बनाएर राखिँदो रहेछ । यहाँको व्यवस्था हामीले सोचेभन्दा पनि राम्रो छ ।'
यस्तै वुहानबाट फर्किएका अर्का चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी डा. सुदीप राउतका अनुसार सरकारले वुहानदेखि नै राम्रो व्यवस्था गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यस्ताे बन्याे खरिपाटी क्वारेन्टाइन [तस्बिरहरुसहित]
'हामीलाई विमानस्थलसम्म पनि निकै राम्रोसँग लगियो । त्यसपछि विमानको यात्रा पनि निकै सुविधाजनक थियो,' उनले भने, 'विमानमा दिइएको खानाले नै हामीलाई निकै खुसी लागेको थियो । किनभने त्यो पूर्णरुपमा स्वास्थ्यको ख्याल गरेर, राम्रो हिसाबकिताब भएको लन्चबक्स थियो ।'
स्वदेश फर्कन पाउँदा अहिले सबै नेपालीहरु निकै हर्षित छन् । त्यसमाथि पनि सरकारले गरेको व्यवस्थाले उनीहरुको मन रमाएको छ ।
'हामीले गर्न नसक्ने त होइन रैछौं नि त,' डा. सबिर श्रेष्ठले भने, 'अलि अगाडि नै यो सबै भइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । ढिलै भए पनि देश फर्कन पाइयो । यति राम्रो व्यवस्था गरेर राखेको छ । भित्रैबाट खुसी लागेको छ ।'
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘फर्कनै पाइँदैन जस्तो लागेको थियो, अहिले हर्षित छौं’
उनको अनुसार केही दिनयता हुबेइको लकडाउनलाई झनै सशक्तरुपमा लागू गर्न थालिएकोले सबैजना त्रसित थिए । 'पछिल्लो समय कोठाबाट बाहिर पनि निस्कन नदिने नीति लिएको छ,' उनले भने, 'अब त सामान पनि अनलाइन नै अर्डर गर्नुपर्ने नियम लागू हुनसक्‍ने सुनिएको थियो । जे भए पनि आफ्‍नो देश आइपुगियो, त्यसैमा खुसी छौं ।'
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ १३:४१
फाल्गुन ४, २०७६ राजकुमार कार्की
पैरे(सिन्धुली) — गेटमा पुग्‍नेबित्तिकै नाम लेखाउनुपर्ने, पैदलयात्री होस् या सवारी साधन र सबैले । यो कुनै सरकारी अड्डा होइन । 'लिटिल बुद्ध' उपमा पाएर यतिखेर बलात्कारको आरोप खेपेका रामबहादुर बम्जनको कमलामाइ नगरपालिका ८ मा रहेको पैरेको आश्रमस्थल हो । गेटबाट दक्षिणतिर लागेपछि जस्ताले छाएका त्रिकोण आकारका लामा घरहरु छन् । अनुयायीहरु यत्रतत्र छरिएर रहेका छन् ।
ठूलो पटाङ्गिनी भएर दक्षिणतरि लागेपछि नवनिर्मित घर आउँछ, जुन आकर्षक शैलीमा बनेको छ । त्यहाँबाट झण्डै पाँच सय मिटर दूरीमा चारैतिर पर्खाल लगाएको र तारले घेरेको भवन आउँछ । त्यहाँ छिर्न निकै कडाइ हुन्छ । अनुयायीहरु गेट बाहिर नै चार हातखुट्टा टेकेर जमिनमा ढोग्‍ने गर्दछन् । गेटभित्र बम्जन बस्‍ने भवन चिनियाँ शैलीमा निर्माण भएको छ । भवन बाहिरबाट हेर्दा नै निकै सुन्दर छ, भित्र त झन् कल्पनाभन्दा बाहिर नै छ । अनुयायीहरुका अनुसार बम्जनलाई खोज्‍ने क्रममा प्रहरीले ढोकाको ताला फोरिदिएको हो । राजकीय सानमा बम्जन सुत्‍ने दुइवटा कोठामा आकर्षक बेडहरु छन् । सजिएको बैठक कोठा छ, भान्सा र शौचालय झनै आकर्षक छन् । कुनै तपस्वीको हो भन्दा पत्यार नै लाग्दैन । बेडमा यत्रतत्र खेलौना छरिएका छन् ।
र्‍याकमा बम्जनको तस्बिर र त्यसमा श्रीमतीको फोटो पनि छ । बम्जन खोज्ने नाममा प्रहरीले धर्ममाथि प्रहार गरेको अनुयायीहरुले आरोप लगाए । बम्जनको आश्रमभन्दा एक किलोमिटर दक्षिण लागेपछि आनीहरुको आश्रम छ । त्यहाँबाट उत्तर खोलैखोला लागेपछि अनुयायीहरुको खानाखाने स्थलमा पुगिन्छ । जहाँ बेसार नभएको दालभात तरकारी पाक्ने गर्दछ ।
अनुयायीहरु बम्जनलाई 'भगवान' मान्छन् । प्रहरीले बम्जनलाई पक्राउ गर्न आश्रम स्थलमा २४ घण्टा नै पहरा दिएको छ । करिब ४२ बिगाह जमिनमा बम्जनको आश्रम छ । २४ बिगाह लालपुर्जा भएको र बाँकी चनदेवी सामुदायिक वनको जग्गा रहेको छ । बम्जनमाथि विभिन्न आश्रममा रहँदा पाँचजना आनी र अनुयायी बेपत्ता पारेको, यौन दुर्व्यवहार, यातना लगायतको आरोपमा किटानी जाहेरी परेको छ ।
पछिल्लो समय बलात्कारको आरोपमा किटानी जाहेरी परेपछि सर्लाही जिल्ला अदालतले पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको छ । उनी फरार सूचीमा छन् । अनुयायीहरुको बोधी श्रवण धर्म संघका अध्यक्ष निलबहादुर थिङले बम्जनको बासस्थान प्रवेशको मूलद्वारमा तालासमेत तोडफोड गरेको र अभद्रता प्रदर्शन गरेको बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ १३:१५